YENZA IBOOT CLEAN KU WINDOWS 10 / 8.1 / 7 UKUTHOLA IZINKINGA - I-WINDOWS 10
Yenza iBoot Clean ku Windows 10 / 8.1 / 7 ukuthola izinkinga
Kwesinye isikhathi, Uzodinga yenza i-boot ehlanzekile ukuxazulula izinkinga ezivamile ku-Windows 10, 8.1, 8 noma 7. I-boot ehlanzekile ikuvumela ukuthi uqale iWindows ngaphandle kokusebenzisa amasevisi angewona awe-Microsoft. Kungakusiza ukuxazulula inkinga futhi unqume ukuthi yiluphi uhlelo noma uhlelo olubangela inkinga onayo. Usebenzisa i-boot ehlanzekile, ungathola ukuthi ngabe i-OS yonakele ngohlelo lokusebenza lomuntu wesithathu noma umshayeli omubi. Ngokuwavimba ekulayisheni, ungalikhipha ngaphandle ithonya lalezi zinto ezimbili.
Lapho Udinga I-Boot Ehlanzekile
Uma ubhekana nanoma yiziphi izinkinga ezibucayi zamawindi kaninginingi, Ungadinga uku yenza i-boot ehlanzekile . Futhi Ngezinye izikhathi ngemuva kokuthuthukela kokwakamuva Windows 10 noma Faka Okwakamuva Windows 10 izibuyekezo, ungahlangabezana nezingxabano zesoftware. Ukulungisa inkinga, kuyadingeka yenza i-boot ehlanzekile . Imvamisa, Siyakwenza lapho sibhekene nezinkinga ezibucayi zewindows njengesikrini esiluhlaza samaphutha wokufa.
Ungayenza Kanjani I-Boot Ehlanzekile Windows 10
Ku-Single Words state boot, iWindows ayilayishi noma yiziphi izinhlelo nezinsizakalo ezivela eceleni ngesikhathi sokuqalisa. Ngakho-ke, Abantu bancamela ukuxazulula izinkinga eziningi zamawindi ngokukhethekile Amaphutha we-BSOD.
Uma ikhompyutha yakho ingaqali ngokujwayelekile, noma ithola amaphutha ahlukile lapho uqala ikhompyutha ongeke ukwazi ukuyibona, ungacabanga ukwenza “ibhuthi ehlanzekile.”
Qaphela: Izinyathelo zeBellow ziyasebenza ukwenza ibhuthi ehlanzekile ku-Windows 10, 8.1 no-7 .
Yenza iBoot Clean
Sebenzisa isinqamuleli sekhibhodi iWindows + R ukuvula i-Run, ’
Thayipha i-msconfig bese uqhafaza u-ok ukuvula iwindi lokumisa uhlelo,
Manje Ngaphansi kwethebhu 'Okujwayelekile', chofoza ukukhetha inketho Ukuqalisa okukhethiwe ,
Bese ungahloli i- Layisha izinto zokuqalisa ibhokisi lokuhlola.
Futhi, Qiniseka ukuthi izinsiza zesistimu yokulayisha kanye Sebenzisa ukumiswa kokuqala kwebhuthi ihloliwe.
usesho alusebenzi ngombono 2016
Ikhubaza amasevisi wenkampani yangaphandle
Manje Iya ku Imisebenzi ithebhu,
Ukusuka lapho, uMark Fihla wonke amasevisi e-Microsoft .
Uzoyithola ezansi kwalelo windi. Manje, chofoza ku Khubaza konke.
Landelayo Hambisa kuthebhu yokuqalisa,
Uthola Inketho evulekile Umphathi womsebenzi chofoza kuyo.
Manje Kwi-Taskmanager ngaphansi kwe-Startup Tab Khubaza Zonke Izicelo Zokuqalisa. Bese uvale i-Taskmanager.
Uma Ungabasebenzisi beWindows 7 Uma uthuthela kuThebhu Yokuqala, Uzothola Zonke Uhlu Lwezinto Zokuqalisa. Susa ukumaka kuzo zonke izinhlelo zokuqalisa bese uqhafaza ku-Apply And ok.
Yilokho kuphela Manje qala kabusha ikhompyutha yakho. Izogcina i-PC yakho isesimweni esihlanzekile se-boot ukubona ukuthi inkinga ihambile yini. Ungavula uhlelo lokusebenza ngalunye ngakunye nezinsizakalo ngakunye ngemuva kwalokho ukuthola ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza oluyimbangela yenkinga yakho.
Ukubuyela ebhuthini evamile, Vele uhlehlise izinguquko ozenzile bese uqala kabusha i-PC yakho.
Futhi uma ibhuthi ehlanzekile ingakusizanga ukulungisa inkinga yokuqalisa sincoma Ku Abafelokazi Bokuqalisa Kwimodi Ephephile (Yikuphi Qala windows ibe Isidingo Esincane Sesistimu Futhi Vumela ukwenza izinyathelo zokuxazulula inkinga ukulungisa izinkinga ezihlukile zokuqalisa).
Ungazilungisa kanjani izinkinga zomsindo noma zomsindo ku Windows 10
Windows 10 Uhlelo lokusebenza lwezithombe aluvulwa / lusebenza ngemuva kokuvuselelwa? Ake sikulungise
Ungayilungisa kanjani iGoogle chrome iyekile ukusebenza windows 10, 8.1 no-7
Ingabe Windows 10 Ukuqalisa Ikhompyutha Kungalindelekile? Sebenzisa lezi zixazululo
Kuxazululwe: Windows 10 I-Laptop Freezes ne-Crash ngemuva kokuvuselelwa kuka-Okthoba 2020
Lungisa Ukungakwazi Ukuthuthuka windows 10 Okthoba 2020 buyekeza inguqulo 20H2
Amasethingi ayisisekelo ayi-11 okufanele uwavumele ukuze uvikele iWindows 10 Laptop / PC
Kuxazululwe: Iphutha le-VPN 691 ku-Windows 10, 8.1 no-7
Nika amandla ukuphequlula okuyimfihlo (imodi ye-incognito) kunoma isiphi isiphequluli sewebhu
Ama-Best 5 Windows 10 Amathuluzi Okutakula Iphasiwedi 2020
Windows 10 I-19H1 build 18214 yethule uhlelo lwakho lokusebenza lwefoni nokusekelwa kwe-HTTP / 2 ne-CUBIC
Kuxazululwe: Windows 10 ukuqala kancane nokuvala ngemuva kokuvuselelwa kweWindows
I-Windows Update KB5000802 yehluleka ukufaka Windows 10 inguqulo 20H2 [Ixazululiwe]
ilayisense lakho lewindows lizophelelwa isikhathi maduze windows 10 pro
windows 10 umugqa wephrinta awusuli
amawindows update awakwazi ukuxhuma kusevisi yokuvuselela
zonke izinhlelo zokusebenza ezingekho windows 10
i-bluetooth ilahlekile emawindini 10
iphutha 691 vpn windows 8